igwe anaghị agba nchara ụmụaka thermos cup
Stainlessnọgide na-agba nchara ụmụaka thermos cup
Ihe: 304 igwe anaghị agba nchara, nri ọkwa eyi
Ike: 280 ml
Ogo: 280ml 22.1 * 7.62cm
Ahịa: USD1- USD2.75 / PC
Atụmatụ: 304 igwe anaghị agba nchara liner nri ọkwa ihe onwunwe 55 Celsius ngwa ngwa mgbanwe mgbanwe ịma jijiji esi mmiri ọkụ mmiri 60 sekọnd obi jụrụ iko mkpuchi sọrọ-eji mmiri ọ convenientụ convenientụ adaba iji hụ na ịdị ọcha nke iko ọnụ
Rim gbara gburugburu dị nchebe maka ụmụaka
The igwe anaghị agba nchara agụụ flask ka nke okpukpu abụọ-igwe anaghị agba nchara nchara na n’èzí. A na-ejikọta tank dị n'ime ya na mpụta mpempe akwụkwọ site na teknụzụ ịgbado ọkụ, mgbe ahụ, ikuku dị na sandwich n'etiti tankị dị n'ime na mpempe akwụkwọ dịpụrụ adịpụ site na teknụzụ agụụ iji nweta mmetụta nke mkpuchi mkpuchi.
Igwe anaghị agba nchara mkpuchi iko na-ekewa: nkịtị mkpuchi iko (mgbe agbapụtara esi mmiri na, na-ejide oge bụ n'ozuzu erughị awa atọ), agụụ mkpuchi iko (site agụụ usoro, mmiri ịgbọ agbọ mmiri nwere ike na-maka ihe karịrị 8 awa)
Igwe anaghị agba nchara agụụ ite nwere ọrụ nke okpomọkụ ichebe na oyi na-atụ ichebe. Nkịtị agụụ flasks nwere ogbenye okpomọkụ ichebe na oyi ichebe ọrụ. Mmetụta nke ikpo ọkụ ọkụ ka mma. Anyị nwere ike iji ite agụụ mee ka mmiri jupụta mmiri ice ma ọ bụ akụrụ mmiri ice n'ụbọchị ọkụ. , Ka ị nwee ike ịnụ ụtọ mmetụta oyi n'oge ọ bụla, enwere ike jupụta na mmiri ọkụ n'oge oyi, ka ị nwee ike ị drinkụ mmiri ọkụ n'oge ọ bụla.
The igwe anaghị agba nchara agụụ ite nwere ike ahaziri dị ka chọrọ, na ime ihe bụ ihe mgbanwe na mfe. Ya mere, ọtụtụ ndị mmadụ na-ele igwe anaghị agba nchara agụụ ite dị ka onyinye ndị enyi, ndị ahịa, na nkwado onyinye. Mee ya na iko iko ma ọ bụ n'elu mkpuchi Zipu ozi ụlọ ọrụ nke gị ma ọ bụ nyefee ngọzi na ọdịnaya ndị ọzọ. Kinddị onyinye a ahaziri ka ọtụtụ mmadụ nabatara.
1. Mgbe ị na-eji, tinye mmiri ọkụ (mmiri ice) iji kpoo ọkụ ma ọ bụ kpoo oyi, mmetụta nchekwa ọkụ ka mma.
2. Ọnụ nke kalama ahụ dị ihe dịka 3.5cm n’obosara, na nri dị ka ice cubes dị mfe itinye, na tank dị n’ime dị mfe ma dịkwa mfe ihicha.
3. designbè imewe, mfe na-ebu. (Lingdị èbè)
Ezi uche nke mmezi:
1. Jide iko thermos ahụ mgbe ọ naghị eji ya ogologo oge.
2. Iji gbochie ọgbọ nke isi ahụ na ntụpọ, biko hichaa ma kpoo mgbe ejiri ya.
3. Ebe ọ bụ na iji mmiri ruru unyi ga-ahapụ ntụpọ uhie dị ka nchara, ọ ga-etinye ya na mmiri ọkụ ma gbanye mmanya mmanya 30 nkeji ma kpochaa.
4. Biko jiri akwa dị nro nke a na-etinye n'ime ihe na-anọpụ iche na sponge moistened iji kpochapụ elu ngwaahịa. A ga-ehichapụ ngwaahịa ahụ mgbe ojiji ọ bụla.
1. A ghaghị ihicha ya mgbe ojiji ọ bụla.
2. Biko jiri ihe dị nro na-anọpụ iche na-adị ọcha, ejila ịcha ọcha ma ọ bụ chlorine nwere ihe iji zere mmebi ngwaahịa ahụ.
1. Jiri obere mmiri na-esi mmiri (ma ọ bụ mmiri ice) kpoo ma ọ bụ kpoo oyi maka 1 nkeji tupu ojiji, mmetụta nke nchekwa ọkụ na nchekwa oyi ga-aka mma.
2. Mgbe i juputara karama ahụ na mmiri ọkụ ma ọ bụ mmiri oyi, gbaa mbọ hụ na ị mechiri plọg kalama ahụ iji zere ikpa mmiri ahụ kpatara.
3. Ọ bụrụ na mmiri oke mmiri ma ọ bụ mmiri oyi dị oke, mmiri ga-adị. Biko rụtụ aka na olu olu ọnọdụ esereese na akwụkwọ ntuziaka.
4. Etinyela ya n’akuku oku iji zere nrụrụ.
5. Etinyela ya n’ebe ụmụaka ruru, ma kpachara anya ka ụmụaka ghara igwuri egwu, enwere ihe iyi ọkụ.
6. Mgbe ị na-etinye ihe ọ hotụ drinksụ na-ekpo ọkụ na iko, biko kpachara anya maka ọkụ.
7. Etinyela ihe ọ followingụ theụ ndị a: ice akọrọ, ihe ọ carbonụ carbonụ carbonated, mmiri nnu, mmiri ara ehi, mmiri ara ehi, wdg.
8. Agba ga-agbanwe mgbe a na-ekpo ọkụ dị ọkụ maka ogologo oge. Ọ ka mma iji akpa tii mgbe ị na-apụ apụ.
Etinyela ngwongwo na efere efere, draya, ma obu ngwa ndakwa nri.
10. Zere karama na-ada na nnukwu mmetụta, iji zere elu ịda mbà n'obi na-eme ka ọdịda nke ogbenye mkpuchi.
11. Ọ bụrụ na ngwaahịa ị na-azụta kwesịrị naanị maka nchekwa nchekwa, biko etinyela mmiri ọkụ iji mee ka ọ dị ọkụ iji zere ire ọkụ.
12. Ọ bụrụ na ị kwụnye nri na ofe nwere nnu, biko wepụta ha n’ime awa iri na abụọ ma hichaa iko thermos.
13. Amachibidoro ibu ihe ndị a:
1) Akọrọ ice, carbonated ọ (ụ (ụ (zere ihe ize ndụ nke esịtidem mgbali ịrị elu, nke nwere ike ime ka kalama stopa ghara imeghe ma ọ bụ ọdịnaya na ịgba si).
2) Acidic na-aidụ ihe ọ suchụ suchụ dị ka piom ihe ọ juiceụ andụ na lemon ihe ọ juiceụ (ụ (ga-eme ka ogbenye mkpuchi)
3) Mmiri ara ehi, ngwaahịa mmiri ara ehi, ihe ọ juiceụ juiceụ, wdg. (Ọ bụrụ na ọ fọdụrụ ogologo oge, ọ ga-emebi)
Nke gara aga: 500ml 800ml 1000ml 1500ml N'èzí anaghị agba nchara thermal mkpuchi mmiri agụụ karama iko maka egwuregwu
Osote: Igwe anaghị agba nchara nwere ike thermos iko
Iko Thermos Cup
Iko Thermos 500ml
Ikuku Thermos agụụ
Igwe anaghị agba nchara nwere ike thermos iko